Corona na-etinye Walibi Holland ka ọ ghara ịmanye ya - Thrilltalk.com
Home/Okwu ogige/Corona kpebiri ịhapụ Walibi Holland
Corona kpebiri ịhapụ Walibi Holland
3 25 Ejiri 2 gụọ
Onye Europe ogige ntụrụndụ ugbu a fọrọ nke nta niile na-emeghe na nha a na-ahụ nke ọma na ogige ndị ahụ. Ole na ole ndị ọbịa, plexiglass meziri na igbe ọ bụla 1,5 mita n'etiti ọbịa iji hụ. Maka ndị na-ahụ maka ogige ntụrụndụ, nke a pụtara na ha anaghị enyocha brackets ahụ wee tụọ aka maka ndị ọbịa. Ọzọkwa, ndị ọbịa pere mpe ka a na-anabata ha n'ogige ntụrụndụ iji hụ na ọ gaghị enwe oke ọrụ.
Naanị na Walibi Holland nke a yiri ka ọ dị iche. N'ọnụ ụzọ nke ebe nkiri Kwupụta onye ọrụ nke bụ ndoputa dijitalụ nke ebe nkiri nyocha nke mere na ọnweghị ọtụtụ ndị nọ kwụ n'ahịrị n'otu oge. A n'elu usoro. Mondaybọchị Mọnde gara aga ọ na-arụsi ọrụ ike na ogige ahụ na sistemụ ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ.
N’ụtụtụ, usoro ahụ dịtụ nwayọ nwayọ mana ọ rụpụtara obere ọrụ. Ruo mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike na ogige ahụ na akara ngosi dijitalụ ruru ihe karịrị 50 nkeji site na mma. Walibi kpebiri ịhapụ ndị ọbịa na kwụ n'ahịrị ahụ na-enweghị ndoputa, nke mere na ndị ọbịa ahụghị na ọ dị mkpa ịhapụ ebe dị anya site na ndị ọbịa ndị ọzọ.
Ma ọ bụ nke dị ugbu a nha nke gọọmentị na-ekwubiga okwu ókè ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị ga-ahapụ ya n'etiti maka ọdịmma. A sị ka e kwuwe, anyị abụghị ndị na-eme ihe nkiri.
De nha amanye site na gọọmentị ga-agbaso maka oge ahụ iji zere ohere nke corona nke abụọ. Ogige ahụ nwere iwu dị iche iche nke ya ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere nke ndị Dutch ndị ọzọ ogige ntụrụndụ. Oge a Walibi Holland bụ onye otu “ọgbakọ iri na otu” na akwụkwọ “Na-echekwa ọnụAgbagharala. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ a na-ekwu, sị:
Onye obia na-emechi brackets n'onwe ha na onye oru na-enyocha ego
Anyị na-ekwenye na anya dị mita 1,5 n’etiti ezinụlọ
Foto ndị ahụ na-egosi n'ụzọ doro anya na ndị ọbịa si Walibi Holland ihe niile ma nha maara ka esi hu n'anya. Ọ dịkwa egwu na ọ dịka obere njikwa ma ọ bụ enweghị nchịkwa sitere na Walibi. Ndị ọrụ na-abịaru ndị ọbịa nso mgbe ha na-enyocha brackets. Ọbịa mkpesa na-elekọta mmadụ media banyere ụzọ Walibi Holland. Ọtụtụ ndị ọbịa na-enwetakwa nnukwu ọnụ mgbe ha gosiri ndị ọzọ ebe dị anya. Ihe anyị bụ naanị n'ime Walibi Holland enwetawo.
Anyị chọpụtara na Walibi Holland na-ahapụ ọtụtụ ndị ọbịa, yabụ enwere okporo ụzọ tupu oghere nke ogige ahụ. Ruo mgbe usoro ndoputa ahụ kwụsịrị ọ dị ka ọ na-achịkwa ogige ahụ, mana site na mgbe ọ dara, ọ dị ka ọgba aghara na-enweghị nchịkwa na ogige ahụ.
Anyị enyefelarị nke a na Walibi Holland na arịrịọ ịzaghachi nke a ka anyị wee tinye nke a n'isiokwu a. Agbanyeghị, anyị anụbeghị site na ogige ahụ ruo taa.
Anyị anụwo site na RIVM na ha na-enyocha ihe oyiyi anyị na mkpesa ndị natara na ha ga-azaghachi ma emesịa.
1.5 mita pụọ igwe na-agba okirikiri okpueze nha mkpara ogige ntụrụndụ rivm Walibi Holland
Ihe ngosi Bourne Stuntacular stunt na Universal Studios
Ndị na-anụ ọkụ n'ogige ntụrụndụ na-agba ọkụ maka ịwakpo ụmụ agbọghọ na-erubeghị afọ iri
Garner Holt na - enye ndị Pirates na Batavia animatronics
Kabinet: ogige ntụrụndụ na zoos emechi
A na-ahapụ ọtụtụ narị ndị otu nkedo nke Disneyland Paris ịpụ
Aziza nke 3
Observer dere, sị:
2 July 2020 na 18: 01
gịnị mere na ị (ma ọ bụ gị) mgbe niile na-ede na-adịghị mma banyere ogige a? Kedu ka ị si mara igwe mmadụ ahụ bụ ihe kpatara sistemụ ahụ ji daa. O nwekwara ike ịbụ mbuso agha ma ọ bụ ahụhụ, ma ọ bụ na-ewepu ya? You nọrọ ebe ahụ ma ọlị kemgbe enweghị ihe ọ bụla bịara, ka ị nọ ọdụ n'akụkụ na-eti mkpu na ị ga-eme nke ọma karị?
Na-edezi dere, sị:
3 July 2020 na 10: 04
Dịka ị pụrụ isi hụ na foto a, anyị gara ebe ahụ n'ezie. Ndị ọrụ ogige na-akọ na ụbọchị ahụ na sistemụ ahụ dara n'ihi na ọ karịrị akarị.
Ọ bụrụ na enwere ihe dị mma ịkọ, anyị ga-eme nke a kwa.
Anyị agaghị na-abanye ndị ọzọ nke gị mmeghachi omume;)
Pingback: Mega funfair Gelredome amalitela! - Thrilltalk.com
Usetọ ntụrụndụ na mkpọchi mgbe amachara